China Fitaovana Vaovao China Manufacturers & Suppliers & Factory
Fitaovana Vaovao - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 24 vokatra ho an'ny Fitaovana Vaovao)
Fandrindran'ny tarika PP Ny fametahana PP dia mety amin'ny fitaovam-panorenana, sakafo, akanjo, kilalao, fanomezana, fanaka, fanamboarana ary fonosana indostria hafa. Ny fehin-kovan'ny PP dia manana loko mihoatra ny 10, mena, maitso, mavo, manga, volomparasy, mainty sns. Mampiasa fitaovana vaovao,...
Plastika vy mametaka tarika fantsona tarika Plastika vy mametaka ny tarika petra fantsona vita amin'ny PET, manana vidiny kely, tahiry, fiarovana ny tontolo iainana, maharitra, endri-pandrihana avo dia avo, fanatsarana biby fiompy hanatsarana ny fahombiazan'ny fikarakarana ny tanana, hampitombo ny habetsaky ny...
Pallet fehikibo fonosana fehikibo Maivana ny fehikibo miora, mora azo afindra, mampitaha amin'ny fehikibo vy, tsy ilaina ny manapaka ny PET tongotra aloha. Izy io izao no fanta-daza fantsom-pifandraisana malaza sy fantsom-baravarankely indrindra, satria fitaovana vaovao, ny fantsom-by vy Pet dia ny porofo...
Nisy mpanao pirinty vita pirinty vita pirinty
Nisy mpanao pirinty vita pirinty vita pirinty Ny fampiasana fitaovana vaovao, ny fanafarana fitaovana, ny fitaovana mahazatra dia manamboatra fametahana vita pirinty, manana hery manintona mafy, ny pirinty vita pirinty dia araka ny filàn'ny mpanjifa, ny fanaovana pirinty, ny teny ao aminy, avelao ho fantatra tsara...
polypropylene PP mitambatra tariby mivalona amin'ny boaty
polypropylene PP mitambatra tariby mivalona amin'ny boaty Ity tariby tariby polypropylene PP ity dia vita amin'ny fanafarana fitaovana vaovao PP. Ampiasainay ny fitaovana vaovao mba hanaovana High Tensile Virgin Pp Strapping. Manana tsipika famokarana 6 izahay hamokatra fitokonana PP, efa nanondrana firenena...
PP plastika boaty pallet fanenitra mitambatra horonana
PP plastika boaty pallet fanenitra mitambatra horonana Ny fametahana PP dia ny fanafohezana ny fantsona polypropylene, fitaovana ara-tontolo iainana sy ara-toekarena, ampiharina amin'ny singa maivana sy haingam-pandeha, fanodinana, famatorana. PP Box Strapping Roll dia afaka manao sakany maro, savaivony, koa...
Pallet fehikibo fonosana fehikibo Ny tariby PET PET dia maivana, mora afindrana, ampitahaina amin'ny fehikibo vy, tsy ilaina ny manapaka ny biby fiompy mamontsina amin'ny alàlan'ny fandrosoana. Izy io izao no fanta-daza fantsom-pifandraisana malaza sy fantsom-baravarankely indrindra, satria fitaovana...
Famandrihana biby fiompy tsara indrindra
Pallet fehikibo fonosana fehikibo Ny tariby fatoran'ny biby fiompy dia maivana, mora famindrana, ampitahaina amin'ny fehikibo vy, tsy ilaina ny manapaka ny biby fiompy fombafomba amin'ny alàlan'ny fandrosoana. Izy io izao no fanta-daza fantsom-pifandraisana malaza sy fantsom-bidy vaovao, toy ny...
Vidiny mora azo raikitra miforitra plastika maintso tsara tarehy
Vidiny mora azo raikitra miforitra plastika maintso tsara tarehy Ny fehin-doko polyester dia fitaovana vaovao fonosana tontolo iainana izay manolo ny fika vy sy ny andriambavy PP,. 1. Ny fametahana plastika dia misy loko marevaka, lanja maivana, fahaiza-manao tsara, hery misintona mahery, fametahana plastika mora vidy...
Mametaka manga pp tsy misy anton-taratasy
Fitaovana fanasiam-bolo miloko ambaratonga loko Stationery Tape dia mafy ary ny hamandoana hiatrehana ny horonam-peo ho fampisehoana mandritra ny asa be dia be. Mety amin'ny fonosana fanomezana sy fanisiana tombo-kase manodidina ny birao sy ny trano. afaka mamokatra eto ambany isika vokatra: Crystal Clear...
Fitaovana rano mifono rano
Fitaovana kalitao avo lenta
Fitaovana Vaovao Fitaovana vaovao Fitaovana akila Fitiavana tsara Fiarovana ambony Fitaovana rano mifono rano Fitaovana kalitao avo lenta Fiarovana karpetra